Koobka Waraaqaha, Boorsada Waraaqda, Baaldiga Waraaqaha - JAHOO
Ku soo DHAWOOW Jiangxi Jahoo Xidhmada
Jiangxi Jahoo Pack Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha hormuudka ka ah Shiinaha, oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee daabacaadda iyo alaabada baakadaha, oo ay ku jiraan koobabka warqadaha, baakadka cuntada loo qaado, sanduuqa midabka midabka ah, sanduuqa hadiyadda, bacda warqadda, kartoonka bandhigga taagan & sanduuqa, buugga, baqshadda, iwm. Waxaan bixinnaa adeegyo hal-joogsi ah laga bilaabo naqshadeynta, wax-soo-saarka illaa gaarsiinta.
Waxaan haynaa qalab aad u horumarsan, sida mashiinada 2 ROLAND, makiinado afar midab leh, makiinado daabacan oo UV ah, mashiinno si toos ah u dhinta, mashiinno waraaqo isku laaban oo awood u leh iyo mashiinno si toos ah xabagta isku xidha. Shirkadeenu waxay leedahay sharaf iyo nidaamyo maarayn tayo leh, nidaamyada deegaanka iyo nidaamyada xakameynta biraha culus.
Waxaan ula dhaqmeynaa mas'uuliyad iyo daacadnimo, si joogto ah u hubineynaa in waxyaabaha saxda ah la sameeyo si xirfad ahaan loo matalo shirkadeena
Waxaan qaadnaa taxane ah warshad isdaahirinta si loo hubiyo in alaabooyinka Buuxiyaan heerarka Caafimaadka iyo amniga.
La tuuro Kraft Paper Shiinaha Noodle Box cuntada ...
Shiinaha Soosaarashada Cheap Custom Logo Kraft Pape ...
cad cad bulk jumlada la tuuro biodeg ...
Wixii weydiin ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan naga tag oo waxaan la xiriiri doonaa 24hours gudahood.
Guud ahaan, sheygu wuxuu yeelan karaa xirmooyin dhowr ah. Bacda daawada cadayga ee ay ku jirto daawada cadayga badanaa waxay ku leedahay kartoon banaanka, sanduuqa baakadaha waa in la dhigaa banaanka kartoonka si loogu qaado loona maareeyo. Baakadaha iyo daabacaaddu guud ahaan waxay leeyihiin afar shaqooyin oo kala duwan. Maanta, tifaftiraha ...
Bacda wax lagu rido ayaa fududahay in la qaado waxaana loo isticmaali karaa in lagu xareeyo walxaha. Qalabka wax soo saarka ee kala duwan, sida warqad gacmeed, kartoon cad, dhar aan tolmo lahayn, iwm. Ma taqaanaa kala soocida gaarka ah ee boorsada gacanta? 1. Bacaha baakadaha xayeysiinta ah Bacaha baakadaha ee xayaysiiska ah waxaa loogu talagalay p ...
Daabacaadda iyo baakadaha: intee in le'eg ayaad ka ogtahay kala soocidda bacaha baakadaha
Baakadaha Alaabada waxaa loo gudbiyaa kartoonada, sanduuqyada, boorsooyinka, finanka, waxyaabaha la gelinayo, istiikarada iyo sumadaha iwm. Baakoyinka wax soosaarka ah waxay bixin karaan difaac ku haboon si looga hortago in alaabada ay waxyeelo soo gaarto inta ay socoto gaadiidka, keydinta iyo iibinta. Ka sokow shaqada ilaalinta, sheyga pa ...